Mmiri mmiri maka Arduino: ihe niile ịchọrọ ịma | Akụrụngwa n'efu
Mmiri mmiri maka Arduino: ihe niile ịchọrọ ịma
O doro anya na ọtụtụ oge ịchọrọ edozi mmiri mmiri n'ime ọrụ Mee N'onwe Gị na Arduino. Iji mee ka nke a kwe omume, ndị na-eme ihe nwere ọtụtụ ngwaahịa na ngwa ọrụ iji rụọ ọrụ. Ugbua gara aga anyị na-egosi ndị ama ama okooko osisi, nke ị nwere ike ijikwa usoro mmiri nke gafere ha n'ụzọ dị mfe. Ugbu a ọ bụ ntụgharị mmiri mgbapụta ...
Iji ndị ahụ okooko osisi Nwere ike ịlele ogo mmiri nke na-agafe na ọkpọkọ iji chịkwaa ya. Ekele niile maka sekit dị mfe na ihe ndị a na ndị ọzọ ngwaọrụ electronic dakọtara ya na Arduino. Ugbu a oge eruola ịga n'ihu iji nye gị ohere ịme mmiri, na-ejuputa / ịtọfu tankị, ịmepụta usoro mmiri, wdg.
1 Kedu ihe bụ mgbapụta mmiri?
2 Ahịa na ebe ịzụta
3 Olee otu mgbapụta mmiri si arụ ọrụ
4 Gwakọta mmiri mgbapụta na Arduino
Kedu ihe bụ mgbapụta mmiri?
N'ezie aha Mmiri mgbapụta odighi ya nma dika o nwekwara ike iji mmiri ozo kari mmiri. Kedu ụzọ ọ bụla, mgbapụta mmiri bụ ngwaọrụ nwere ike iwepụta mmiri mmiri site na iji ume ọrụ. Ya mere, o nwere ụfọdụ ihe dị mkpa:
Entrada: ebe mmiri mmiri na-etinye obi gị dum.
Motor + Ahịa: onye na-ahụ maka ịmị ike ume ọrụ nke na-amịrị mmiri site na nbata ahụ wee zipụ ya site na nbanye.
Wepụ: ọ bụ uzo ebe mmiri mmiri na-agbanye site na ike nke mmiri mgbapụta ga-apụta.
Ndị a bọmbụ haịdrọlik a na-eji ha arụ ọrụ na ọtụtụ ngwa ọrụ. Site na ụlọ ọrụ, na igwe na-ekesa mmiri, sistemụ mmiri na-akpaghị aka, ịgba mmiri mmiri, usoro ntinye, osisi ọgwụgwọ, wdg. Maka nke a, enwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ụdị na ahịa, nwere ike na ikike dị iche iche (nke a tụrụ na lita kwa elekere ma ọ bụ ihe yiri ya). Site na nke pere mpe, nke kachasị ukwuu, maka mmiri ruru unyi ma ọ bụ maka mmiri dị ọcha, miri ma ọ bụ elu, wdg.
Na usoro nke njirimara Ndị ị kwesịrị ile anya bụ:
Ike: tụrụ na lita kwa awa (l / h), lita kwa nkeji (l / min), wdg. Ọ bụ oke mmiri ọ nwere ike wepụta kwa nkeji oge.
Oge awa bara uru- Ọ na - etinye oge ọ ga - aga n’ihu n’enweghị nsogbu. Ọ bụ okenye, ọ ka mma. Ha na-abụkarị oge 500, oge 3000, awa 30.000, wdg.
Noise: Atụpụtara na dB, ọ bụ oke mkpọtụ ọ na-arụ ọrụ. Nke a adịchaghị mkpa, belụsọ ma ịchọrọ ka ọ nọrọ jụụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, chọọ nke nwere <30dB.
Nchedo: ọtụtụ nwere IP68 nchebe (eletrọniki na-enweghị mmiri), nke pụtara na ha nwere ike ịbanye n'ime mmiri (ụdị amphibious), ya mere ha nwere ike ịnọ n'okpuru mmiri mmiri n'enweghị nsogbu. Ndị ọzọ, n'aka nke ọzọ, dị n'elu ma ọ bụ naanị ọkpọkọ mmiri nwere ike ịbanye n'ime ya nke na-amịkọrọ mmiri ahụ. Ọ bụrụ na ha abụghị submersible na ị na-etinye ya n'okpuru mmiri mmiri ọ ga-emebi ma ọ bụ obere circuit, n'ihi ya ntị ka nke a.
Static ebuli: a na-ejikarị mita mita atụ ya, ọ bụ ogo nke mmiri mmiri ahụ nwere ike ịkwaga. Nke a dị mkpa karịsịa ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya bulie mmiri dị ogologo ma ọ bụ wepụ mmiri na olulu mmiri, wdg. O nwere ike ịbụ mita abụọ, 2m, 3m, wdg.
Nri- A tụrụ ya na watts (w) ma gosipụta ike ole ha kwesiri ịrụ ọrụ. N'ọtụtụ oge ha na-arụ ọrụ nke ọma, ha nwere ike ịnwe oriri nke 3.8W karịa ma ọ bụ obere (maka obere).
Nnabata mmiri mmiri: Dị ka m kwuru, ha na-anabata ọtụtụ ụdị mmiri mmiri, ọ bụ ezie na ọ bụghị ha niile. Ọ bụrụ na ịchọrọ ijide n'aka na mgbapụta ị zụrụ nwere ike ịrụ ọrụ na mmiri mmiri ị ga-ejikwa, lelee nkọwapụta onye nrụpụta a. Ha nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma na mmiri, mmanụ, asịd, alkaline ngwọta, fuels, wdg
Motordị moto: Ndị a na-abụkarị moto eletrik DC. Brushdị brushless (na-enweghị brushes) dị mma karịsịa ma dịgide. Dabere na ike nke injinị ị ga - enwe mgbapụta nwere ikike ma ọ bụ obere na ogo dị elu.
Pdị mgbasa ozi: moto ahụ nwere propelape na njikọ ya, nke bụ ihe na - eme ka ikuku ikuku na - ewepụta mmiri mmiri. Ndị a nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche, na ọsọ na agba nke mgbapụta ahụ na-arụ ọrụ ga-adabere na ya. Enwere ike ibipụta ha site na iji mbipụta 3D nwere nsonaazụ dị iche dabere na ọdịdị ha. M hapụrụ gị vidiyo na-adọrọ mmasị banyere ya:
Ozi ndị ọzọ na Ihe.
caliber: ntinye na uzo ntaneti nwere nlele anya. Nke a dị mkpa mgbe ọ na-adaba na ọkpọkọ ị ga-eji. Otú ọ dị, ịnwere ike ịchọta ndị nkwụnye maka ntanetị dị iche iche.
Peripheral vs centrifugal (radial na axial): Ọ bụ ezie na e nwere ụdị ndị ọzọ, a na-ejikarị abụọ a eme ihe maka ngwa ụlọ ndị a. Ha dịgasị iche dabere na etu esi etinye pọọpe na eriri ahụ, na-eme ka mmiri dị na mmiri ma ọ bụ n'akụkụ. (Maka ozi ndị ọzọ hụ ngalaba na "Otu mgbapụta mmiri si arụ ọrụ")
Mana n'agbanyeghị ụdị na arụmọrụ, mgbe niile na-achịkwa eletrik. Site na inye moto nke na - eme ka ndi na - acho ha weputa ike ha, enwere ike ijikwa ojiji ha. Ya mere, enwere ike iji obere nfuli (ma ọ bụ buru ibu nwere relays ma ọ bụ MOSFETs) iji rụọ ọrụ hydraulic na-arụ ọrụ na Arduino.
Banyere ngwa ya, ekwuola m ole na ole. Mana chee na ị nwere ike iji Arduino mepụta ọrụ nke gị. Iji maa atụ, lee, ahapụrụ m gị echiche ọ bụla:
Obere ụlọ na-arụ ụlọ ka ị mụta ka ezigbo ụlọ ọrụ ọgwụgwọ si arụ ọrụ.
Usoro ngwongwo nke na-achọpụta mmiri site na ihe mmetụta ma rụọ ọrụ mgbapụta mmiri iji kpoo.
Igwe ihe ọkụkụ na-arụ ọrụ na oge.
Nyefee mmiri site n'otu ebe ruo ebe ọzọ. Fluid agwakọta usoro, wdg
Ahịa na ebe ịzụta
Mgbapụta mmiri bụ ngwaọrụ dị mfe, ọ nweghị oke ihe omimi. Ọzọkwa, maka € 3-10 ị nwere ike zụta ụfọdụ nfuli eletrọnik kachasị dị mfe maka Arduino, n'agbanyeghị na enwere ndị dị oke ọnụ karị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ike dị elu. Iji maa atụ, ị nwere ike inwe ndị a:
12v submersible mgbapụta na 240 l / h ikike na 3m static inwego
12v UEETEK submersible mgbapụta na 10 l / min ikike na 5m static inwego
240l / h submersible mmanụ na mmiri Obere-mgbapụta, na 3m static inwego.
12V mmiri mmiri na-agba mmiri na 5m dị elu na 600 l / h.
24V submersible mgbapụta na static elu nke 5m na 1300 l / h.
Mgbapụta mmiri nwere nkwụnye 220 / 240v nwere ikike nke 1500l / h na 2m nke ebuli elu.
Mini submersible mgbapụta 2.5-6v 80-120 l / h
Igwe mgbapụta dị jụụ dị jụụ na 3.5m na-ebuli elu na ikike 7.5 l / min
Mmiri JOYKK micro pump pump 2.5-6V nwere ikike nke 80-120 l / h
Olee otu mgbapụta mmiri si arụ ọrụ
Igwe mmiri mgbapụta ọ na-arụ ọrụ n'ụzọ dị mfe. O nwere ihe ozo di na moto ahu, si otu a na ebufe ike na mmiri nke na-agabiga na ahihia ya, si otú a na-eme ka o si na ntinye banye.
Na ndị nke ụdị axial, mmiri ahụ na-abanye n'ime ụlọ mgbapụta ahụ ebe nrụpụta dị n'etiti, na-amụba ume ike ya ka ọ na-agabiga ihe ahụ na-agbagharị na oke ọsọ. Ọ ga - apụ n'ọnụ ụlọ ahụ n'ụzọ dị mkpa site na ụzọ ọpụpụ.
En radial, ahịhịa ahụ na-agbagharị n'ihu oghere mbata ma mee ka mmiri ahụ banye na ntanetụ ahụ dị ka a ga-asị na ọ bụ wiilị mmiri. Nke a bụ otú ha ga-esi bugharịa mmiri na nke ọzọ.
Gwakọta mmiri mgbapụta na Arduino
Dị ka ị maara, ị nwekwara ike iji a agba anọ ọ bụrụ na ị chọrọ ya. Mana ebe a, iji jikọta igwe mmiri na Arduino ahọrọwo m MOSFET. Kpọmkwem modul IRF520N. Maka njikọ ahụ, eziokwu bụ na ọ dị mfe, naanị soro ndụmọdụ ndị a:
SIG nke modul IRF520N ga - ejikọ ya na pin Arduino, dịka ọmụmaatụ D9. Maraworị na ọ bụrụ na ị gbanwee ya, ị ga-agbanwerịrị eserese eserese iji mee ka ọ rụọ ọrụ.
Vcc na GND nke modul IRF520N ị nwere ike ijikọ ha na 5v na GND nke bọọdụ Arduino gị.
U + na U- Nke a bụ ebe ị ga - esi jikọọ wires abụọ site na mgbapụta mmiri. Ọ bụrụ na akwụghị ụgwọ ahụ n'ime ya, ọ bụ ibu ọrụ na-akpali akpali, yabụ ọ ga-abụ ihe amamihe dị na iji eriri azụ n'etiti eriri abụọ ahụ.
Vin na GND bụ ebe ị ga-ejikọ akwa ahụ na batrị ndị ị ga-eji mee ka mgbapụta mmiri dị na mpụga, ma ọ bụ batrị, ike ọkọnọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ị ga-eji mee ya ...
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-achịkọta ihe niile ma dịkwa njikere ịmalite site na osise koodu. Iji mee nke a, na IDE Arduino ị ga-emepụta mmemme yiri nke a:
Na nke a nanị gbanye mgbapụta na na-eme ka ọ na-arụ ọrụ maka 10 min. Ma ị nwere ike itinyekwu koodu, ihe mmetụta, wdg, ma jikwaa ya dabere na mmepụta nke ihe mmetụta nke iru mmiri, na-eji oge, wdg.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Mmiri mmiri maka Arduino: ihe niile ịchọrọ ịma
1n4007: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara diode a
CTC 101: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara mmemme a